China Factory Pressure Cooking, mpamatsy sakafo fandrahoana
JINGYE Industrial Pressure Cooker dia antsoina koa hoe canner pressure industrielle, dia lovia fandrahoana tsindry misy fonony mihidy izy io, azo antoka fa mahandro vokatra ao ambany fanerena.
Kettle Pressure Pressure
JINGYE Tilt Pressure Kettles, antsoina koa hoe fandrahoan-tsindry indostrialy, izy io dia mety indrindra amin'ny fandrahoana sakafo sy fikolokoloana hena, legioma, legioma ary serealy. Ny vokatra vita dia hitazona ny habetsaky ny vitamina, mineraly ary otrikaina.
Miaraka amin'ny fotoana fohy mahandro 30-40% ary hatramin'ny 70% ny fanjifana rano, kely kokoa ny fihenan'ny lanja vokarena amin'ny famokarana sakafo tsara kalitao sy ny bonus fanampiny 40-60% mitsitsy amin'ny fanjifana angovo amin'ny ankapobeny.
JINGYE Pressure Kettles, antsoina koa hoe fandrahoan-tsolika indostrialy, manana sisiny hemisphere manokana miaraka amina palitao feno, ary nafanaina tamin'ny sosona palitao hemispherical tena izy, hahazoana antoka fa hafanaina mandritra ny fotoana fahandro ny fitaovana.